SAWIRADA TARANKA EEYAHA SCHNOODLE, 3 - EEYAHA
Sawirada Taranka Eeyaha Schnoodle, 3
Schnauzer / Poodle Dogs Nooc Isku Daran
Buster-ka Schnoodle (Black Schnauzer / Poodle mix) oo jira 7 sano
Gunta yar Schnoodle
KU qashin eeyaha yaryar ee Schnoodle , xushmadda sawirka Schnoodles ee Bexley
Lexi the Schnoodle oo ah eey yar oo 8 toddobaad jir ah
Tani waa Annie oo jirta 9 toddobaad. Iyadu waa caan ah Poodle / Schnauzer isku dhafan oo ku yaal Dallas, Texas. Waxay ahayd mid si fudud loo tababaray, aad ayey u caqli badan tahay waxayna kala saari kartaa kubbadda iyo wixii kale ee ay ku ciyaaraan. Iyadu waa mid cayaareed, haddana kalgacal badan, waxaana laga soo badbaadiyay bulshada deegaanka ee Aadanaha.
Cody khudaar Schnoodle markuu jiray 6 bilood
Cody abrikot Schnoodle wuxuu umuuqdaa mid cadaan ah kadib markii dharkiisa loo hagaajiyay waxyar. Waa 10 bilood jir sawirkan.
Cody the Schnoodle markuu jiray 3 sano
Kaya madow Schnoodle madow qiyaastii 1 sano-iyada oo dhan waa dabiici oo waligeed lama jarin.
Kani waa Samantha a parti Schnoodle sida eey yar at 11 toddobaad jir. Mulkiilayaasheeda waxay ugu yeeraan 'Sammi' soo gaabin, maxaa yeelay iyadu waa ilma yar! Waxay jeceshahay inay fuulo albaabkeeda oo ay gasho makiinada weelka lagu dhaqo! Laakiin isku soo wada duuboo, iyadu waa hal eyg macaan. 11 usbuuc ayey sifiican ugu shaqeysaa sharciyada jabinta guryaha.
Walaalaha Schnoodle Mookie (bidix) iyo Buffy (midig)
Mazy oo 1 sano jir ah oo ku nasanaya barkadda
Kani waa Angel Noelle. Iyadu waa 2 jir Schnoodle. Culeyskeedu waa 9 rodol dhererkiisuna waa 12 inji. Iyadu waa qof caqli badan oo kalgacal leh. Milkiilaheeda ayaa leh, Iyadu waa farxad iyo wehel weyn. Iyadu waa jacaylka noloshayda.
eeyga ugu caansan sanadka 2015
Schnoodle Sawirada 1
Schnoodle Sawirada 2
Schnoodle Sawirada 3
Schnoodle Sawirada 4
Schnoodle Sawirada 5
sawirro jilicsan oo sarreen ah oo terrier ah
shih tzu eyga bunni iyo cadaan
sanka buluug sawirada eey pitbull
schnauzer weyn iyo isku dhafka poodle
SUNTZU shih qas yorkie weynaado